Kooxda Shabaab oo isaga baxeen Kismaayo - Warbixinta Keydmedia Online *Updates* | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Shabaab oo isaga baxeen Kismaayo - Warbixinta Keydmedia Online *Updates*
Keydmedia Online (KON) - Waqtigii Kooxda Shabaab ma dhamaaday? - Xaalada Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobbolka Jubbada Hoose ayaa wali ah mid cakiran, waxaana magaalada Maanta ka jira cabsi iyo xaalad aysan galin dhowr Sano ka hor.
Kismaayo (KON) - Warar lagu kalsoonaan karo oo naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobbolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in Idaacadii andalus ee ku hadli jirtay afka kooxda Shabaab maanta hawada laga saaray, qalabkii idaacadana magaalada laga raray.
Kismaayo oo ay markii hore ku yaali jirtay idaacada andalus oo qura maanta waa idaacad la'aan, waxaana dadka reer Kismaayo ay ka soo kabanayaan borobagaandadii idaacada kooxda Shabaab.
Wararku waxaa ay soo sheegayaan in qalabka idaacada loo soo raray dhanka degmada Jilib oo ah dhanka ay u soo carrareen horjoogayaashii Shabaab ee Kismaayo.
Idaacada Andalus xarunteeda magaalada Kismaayo waxaa ay ahayd xaruta idaacada shabaab ugu weyn.
Xaaladihii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Kismaayo
Kismaayo axaa Saakay ilaa shaly isaga baxaayay Horjoogayaashii iyo Maleeshiyaadkii mudada dheer soo maamulaayay ee Shabaab kadib markii ay culus dhanka awooda ah ay kala kulmeen Ciidamada Dowladda Soomaaliaya, Raaskaambooni iyo kuwa Kenya ee AMISOM.
Magaalada Kismaayo waa magaalo muhiim ah waxayna gundhig u tahay inta badan hawlgalada socda, iyada oo ay sidaasi tahay Kismaayo waxaa maamula Al shabaab oo ka talinaayey Sanadahii lasoo dhaafay.
Hareeraha Kismaayo todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ka dhacayay dagaallo xooggan oo u dhaceeyay xooggaga ku loolamaya gacan ku heynta Jubbooyinka, waxaana dagaaladaasi ay cabsi iyo wal wal xooggan ku abuureen qebaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada.
Dadka ku nool Kismaayo oo mudo haatan laga joogo 4 Sano aan arkin Ciidamo Dowladeed ayaa ka wal walsan waxa dhici doona hadii ay magaalada gudaha u soo galaan Ciidamada huwnata ah.
Ciidamada Dowlada ayaa lagu barto Dil, Dhac iyo Kufsi.
News: Horjoogayaashii Kooxda Shabaab oo Gabi Ahaanba Faarujisay Kismaayo
"Waxaan ka baqeynaa Ciidamada Dowlada iyo Amisom dhibaatadee noo keenaan, intii Shabaab ey Kismaayo Maamulayeen dhibaatooyinka wey yaraadeen" ayuu yiri Yusuf M. oo ah Macalin Dugsi.
Dowladda Kenya ayaa la sheegay in qorshaynayso qabsashada Kismaayo si meesha looga saaro ka hadalka dhul xeebeedka dalxiiska ku fiican ee ay Kenya ka haysato Soomaaliya sida xeebta Lamue iyo kuwa kale.
Kenya waxay iminka ku hawlan tahay sidii ay Dekeda uga dhisi lahayd mid kamid ah xeebaha ay ka haysato Soomaaliya, haddii ay Kismaayo qabsato waxaa aad u yaraanaaya ka hadalka dhulka ay ka haysato Soomaaliya, taasi bedelkeed waxay dad badani ku mashquulaayaan magaalada Kismaayo.
Magaalada maanta waa cidlo oo ma jirto cid ka arrimineysa, Maleeshiyaadkii Shabaab waa ay baneeyeen magaalada, Ciidamada huwanta ahna wali ma soo gaarin.
Madaxda Dowladda Soomaaliya ah waxay ka cabsi qabaan in haddii Kismaayo laga saaro Shabaab ay dhacdo mid lamid ah sheekadii sanadkii 2007-dii markii Kismaayo laga qabsaday Midowgii Maxaakiinta Islaamka.
Sikastaba, dad badan ayaa aaminsan in Kismaayo ay ku roon tahay in ay shabaab sii haystaan maadaama shabaabka kadib uu khilaaf ka taagan yahay cidda maamulaysa magaalada.
W/D: Xafiiska Kismaayo / Keydmedia Online